TAALO BIXIN GUUD OO SALKA KU HAYSA CAAFIMAADKA IYO AMAANKA – hogaanka.org
Marka ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa waalidkii iyo ehelkii caruurtii xalay ku geeriyootey shilkii dabkii gubey gurigoodii Allah (swt) Samir iyo iimaan ha ka siiyo dhamaantood hooyadaa dhawaacu soo gaadheyna Allah (swt) caafimaad sareecana ha siiyo, aamin yaa Rabi.
Geeridu waa xaq oo waa aynu ku wada xukuman nahay.Balse waxaad moodaa in dayac weyni ka jiro sharciyada ku saabsan caafimaadka iyo amaanka ee dhinacyada shaqada,wershadaha,korontada, kiimikada, dawooyinka iyo cuntooyinka dalka la soo gelinayo.Taasina waa mida keenta in si khaldan ganacsatadu u adeegsadaan adeegyadaasi ay bulshada u fulinayaan oo aad moodo in aaney danba ka gelin amaanka iyo caafimaadka dadka macmiisha u ah ee adeega u fidinayaan iyo shaqaalaha adeegaa fulinaya.
Sidaa darteed waxaa aan talo ku bixinayaa arimahan:
I- QAWAANIINTA KORONTADA(ELECTRICAL REGULATIONS)
1- Dawlada Somaliland waa in ay si dhaqso ah u dhaqan gelisaa sharciga korontada ee la xidhiidha caafimaadka iyo amaanka korontada qaranka hadii uu jiro hadii aanu jirina si dhaqso ah loo sameeyaa.
2- Waa in meshiinada laydhka ee khatarta gelin kara nolosha dadka la geeyaa meel ku haboon waayo amaanka iyo caafimaadka dadka iyo hantida ba halis bay ku yihiin.
3- Waa in xadhkaha korontada yo dhidibyada korontaduba ahaadaan kuwo aan khatar ku ahayn nolosha,hantida,caafimaadka intaba.
4- Waa in dadka ka shaqeenaya korontadu yihiin dad xirfad u leh oo qaba tababaro iyo aqoon la xidhiidha xirfadooda haystaana aqoonsiyo cadeynaya xirfadooda shaqo.
5- Waa in dawladu qaadataa kaalinteeda ku aadan waajibka ka saaran caafimaadka iyo amaanka korontada iyo waxkasta oo keeni kara dhimasho iyo dhaawac naf iyo maalba.
6- Waa in dawladu dhistaa gudi aqoon yahano ah oo ay xubno ka yihiin proff.jaamicadaha dalka ee aqoonta u leh korontada, Ciidamada dab demiska, poliska engineerada korontada,kuwa dhismaha,biyaha ,wasaaradaha hawlaha guud,wasaarada macdanta shidaalka,warshadaha, caafimaadka arimaha gudaha, wakaaladaha korontada ee madaxa banan iyo kuwa dawlada wasaarada technologyada hayada tayada, dawladaha hoose ee dalka .
7- Gudiyadaas iyo hayadaha dalka ee ay khuseyso caafimaadka iyo amaanka (Health and safety) waa in ay dejiyaan qorshaha iyo nidaamka lagu xakameenayo dhibaatooyinka ka dhalan kara korontada iwm.
8- Dawladu waa in ay gacanta dawlada ku soo celisaa wershadii korontada ee Qaranka ama la mideeyaa dhamaan nidaamka korontada dalka.
9- Waa in wershadaha korontada ,qalabkooda korontada sida xadhkaha, voltage ,qulqulka korontada(current),intaba la hubiyaa in aaney khatar ku ahayn nolosha nooloaha,qalabka iyo hantida kaleba waana in dawladu u sameysaa hayad kula xisaabtanta kormeerta sharcigana ku ilaalisa arimaasi oo dhan.Si cid kasta oo ku xadgudubta sharciga loo horgeeyo. Sidaa darteed waa in dawladu sharciyada dalka ee fadhiidka ah hawlgelisaa sida shuruucda caafimaadka iyo amaanka. Waxaa jira in dalka dhibaatooyin badani oo dhinaca tayada badeecadaha ahi ka jiraan. Kuwaas oo u baahan in waxbadan laga qabto xitaa qaabka dhismaha guryaha iyo qorshaha dhulku ma aha mid waafaqsan qawaaniinta caaafimaadka iyo amaanka(health and safety).Sidaas darteed xitaa hadii loo baahdo si volunteer ah ayaa uga qab qaadan karayaa dejinta sharciyada la xidhiidh arimahasi si dalkaygu u dhismo aniga oo aan waxba ka rabin Alle dartii ayaa u sameynayaa, waa la heli karaa dad badan oo iga aqoon badan oo iyaguna tabaruc dalkooda wax ugu qabanaya hadii la hawlgeliyo oo dawladu abaabusho iney ka faaiideysato dadkeeda aqoonta leh iyaga oo aan xil iyo xoolo toon aka rabin.Ugu dambeyntii
Waxaa soo jeedinayaa in baadhitaan madax banana lagu sameeyo sababta ay u dhinteen afartaa caruurta hi ee ku gubtey gurigooda sharcigana la horgeeyo cid kasta oo lug ku yeelatada dhacdaasi.
WAA MAXAY BAAHIDA INOO HAYSA KALADOORASHO 3 MUSHARAX Q: 3? Previous
Levels Of Islam Next